Appboy: Fahmitaan, Tijaabi oo Ka Qaybgal Isticmaalayaasha Mobilka | Martech Zone
Nidaamka deegaanka ee guurguura ayaa ku qarxay in ka badan 1 milyan oo barnaamij saddexdii sano ee la soo dhaafay. Shirkadaha waxay la halgamayaan kharashaadka soo iibsiga isticmaale sare iyo heerarka haynta oo hooseeya. In ka yar 60% barnaamijyada moobiillada ayaa si wanaagsan ugu soo celiya maalgashiga.
Appboy waa xal ku saleysan xogta kaas oo u suurta geliya suuq geynta barnaamijyada moobiilka inay ku abuuraan astaamo adeegsade hodan ku ah dhagaystayaashooda moobiilka, ka dibna ku xoojinaya qolka alaabada otomatiga ah ee suuqgeynta:
Ogeysiiska riix si toos ah u siiso macluumaadka ku habboon, waqtiga ku habboon shaashadda guriga isticmaalahaaga (xitaa haddii uusan barnaamijku firfircooneyn), kordhinta hawlgelinta 30-60%.
News Feeds Abuur hab lagu muujiyo qaybo waaweyn oo ka kooban muuqaal kaar toosan iyada oo aan la xadidayn ogeysiisyada riixa iyo farriimaha ku jira barnaamijka.
Farriimaha gudaha ku jira siiyaan kanaal isgaarsiineed si aad u riixdo ogeysiisyada, laakiin gudaha barnaamijka iyo dabacsanaan weyn.
Email waxay bixisaa qaab loola xiriiro dadka isticmaala wixii ka baxsan barnaamijkaaga moobiilka. Qiimaha furan ee emaylka ee mobilka ayaa dhaafiyey desktop-ka, waa muhiim in emaylku qayb ka noqdo isku-darkaaga kanaalka badan.
Faallo-ku-celinta app-ka iyada oo loo marayo foomamka iyo taageerada macaamiisha waxay siisaa marin u helka astaamaha isticmaaleyaasha arrimaha isla markaana si dhakhso leh wax uga qabta dhibaatooyinka si loo yareeyo dib u eegista bakhaarka abka xun. Is dhexgalka barnaamijyada dhinac saddexaad sida Zendesk, Salesforce Desk.com iyo UserVoice sidoo kale waa la heli karaa.
Kala-goynta - bartilmaameed oo la abuuro nuxur u gaar ah danaha isticmaalaha.
Imtixaanka Iskuduwida - awoodda lagu tijaabiyo lix nooc oo ka mid ah kanaalada farriimaha badan oo ay ka mid yihiin fariimaha ku jira barnaamijka, emaylka iyo ogeysiisyada riixa.
Shaqaale xirfadlayaal ah ayaa sidoo kale loo heli karaa inay ka caawiyaan xaqiijinta guusha, wadista heerarka beddelaadda ololaha oo si joogto ah uga sarreeya 30%. Appboy wuxuu arkay kobaca 400% 9-kii bilood ee la soo dhaafay wuxuuna hada tirinayaa inka badan 1,000 macmiil, oo ay ku jiraan Qoraal +, Shaqaalaha magaalooyinka, NSG, SnapSnap, Bloomberg, Qaab iyo PopSci.
Tags: appboygeo-goobbartilmaameed-dhulbar-tilmaameedkaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkataageerada macaamiisha barnaamijka moobiilkafariimaha moobilkaemaylka gacantamarketing mobileotomaatiga suuq geynta mobiladamobiil fara badanwararka wararka mobiladaogeysiisyada riixa mobilkatijaabinta noocyo badanriix ogaysiisyada
Tilmaame ku Saabsan Suuqgeynta Koontada Suuqgeynta
Nov 7, 2013 saacadu markay tahay 6:34 PM
Madal xiiso badan. Waad ku mahadsantahay hordhacaan, waxaan u baahanahay inaan si dhow u barto tan kahor soo jeedinta.